अर्काकी स्वास्नी ताक्दा भयो यस्तो हालत, यस्तो रहेछ तस्वीरको वास्तविकता | Rajmarga
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्वीर भाइरल बनेको छ । जसमा एक जना व्यक्तिको हातमा खुट्टा र खुट्टामा हात उम्रिएको देखाइएको छ।
पोस्टमा लेखिएको छ कि यो व्यक्ति अर्काको स्वास्नीसँग सतेको थियो, त्यही कारण भगवानले यस्तो सजाय दिए । वास्तविकता ध्यानै नदिइन मानिसहरु यो तस्वीर धमाधम शेयर गरिरहेका छन्। आखरि यो तस्वीरको वास्तविकता के हो त ? के यो व्यक्तिलाई भगवानले सजाय दिएकै कारण यस्तो केही भएको हो ?
भाइरल पोस्टमा के छ ?
फेसबुकमा अब्दुल नामका व्यक्तिले यो तस्वीर पोस्ट गरेका हुन् । त्यसमा उनले लेखेका छन् कि यो व्यक्तिले अर्काकी स्वास्नीसँग सुतेको थियो, जसका कारण भगवानले उनलाई यस्तो सजाय दिए ।पोस्टपछि मानिसहरुले विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । केही फेसबुक प्रयोगकर्ताले वास्तविकता ख्यालै नगरी यस्ता व्यक्तिलाई यस्तो सजाय सही भएको समेत बताएका छन् । यद्यपि यो तस्वीर शेयर गरेर नराम्रो काम नगर्नका लागि चेतावनी पनि दिइरहेका छन्।
के हो त फोटोको वास्तविकता ?
फोटोमा जुन व्यक्तिलाई देखाइएको छ, उनी अरु कोही होइनन् । बरु नाइजेरियाका एक्टर मुकाइला हुन् । उनको यो लुक मेकअप गरेर बनाइएको हो । मेकअफबाट यस्तो कमाल नाइजेरियामा निकै लोकप्रिय छ । नाइजेरियाका चर्चित मेकअप कलाकार हकिम ओनिलोगबोले यो आर्ट तयार पारेका हुन् । हकिम मेकअपका यति एक्सपर्ट छन् कि उनलाई हकिम इफेक्ट पनि भन्ने गरिन्छ । उनी मेकअपको माध्यमबाट जोसुकैलाई जुनसुकै जनावरको स्वरुप पनि दिन सक्दछन्।
हकिमका बारेमा भन्ने गरिन्छ कि उनी पहिला कलाकार बन्न् चाहन्थे तर जब कुरा मिलेन तब उनी मेकअप सिक्न सुरु गरे र उनी मेकअपमा यति माहिर बने कि उनले कयौ अवार्ड जितेका छन् । एजेन्सी
Previous post: आफ्नै दुध बेचेर यी महिला यसरी बनिन् लखपति
Next post: किशोरी र महिलाको अश्लील भिडियो बनाई पैसा ठग्ने पक्राउ
किचनमा भएको एउटा गल्तीले कामदारको भाग्य चम्कियो, रेष्टुरेण्ट मालिकले पार्टनर बनाए